Mali : Vely Karavasy No Entina Mampihatra Ny Charia Any Avaratr’i Mali · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2012 3:39 GMT
Tsy ela akory izay, ny tana-maherin'i Ansar Eddine sy ny fametrahana ny Charia any Avaratr'i Mali dia niseho tamin'ny endrika namoa-doza tao Tombouctou. Mpivady niteraka iray ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna no voaheloka hahazo vely karavasy 100 tsirairay avy, eny imasom-bahoaka. [Tandremo: mety hanohina ny sasamy amin'ny mpijery ny lahatsary manaraka etoana]
Araka ny tatitry ny Jeune Afrique, Mohamed Ould Baby, olom-boafidy tao amin'ny tanàna, no manoritsoritra ny zavatra rehetra manodidina ilay sazy sy ny zava-niseho tsy takatry ny saina nahavàka ireo olona maro:
Ny hamafin'ny habibian'ny zava-nitranga dia vao mainka nampitomboin'ny fanafenana ny endrik'ireo tanora sy ny tsy firaikan'ireo nanatrika nanoloana izany rehetra izany, toy ny hoe ngolin'ny tahotra sy ny tsy fahatakàrana. Avy eo noterena hivady ireo tanora. Vavolombelona ny tranga toy izany i Moussa Kaka, fahangolen'ny vahoaka izay namely koa ireo mponina ao Gao. Mitantara izy ao amin'ny Slate Afrique :
Olona iray hafa no manamafy ao anatin'ilay lahatsoratra ihany :
Ny fampiharana ny Charia any Avaratr'i Mali dia iray amin'ireo tanjona fototry ny tarika islamista Ansar Eddine izay nandray ny fifehezana an'i Tombouctou nandritra ny fotoana fohy niaraha-nitantana tamin'ny governemanta touareg MNLA.
Malijet no manome ny antsipirihany amin'ireo lalàna hafa ao ami'ny Charia napetraka any amin'ny faritra Avaratr'i Mali :
Marobe ireo Maliana nijoro manohitra ity famaizana ity. Saingy tsy Ansar Eddine irery no iray mizaka ny fanakianana sy fanalà-baraka ataon'ny mpiondana aterineto. Doumbia dia isan'ny mahazo henatra manoloana izao zava-mitranga izao :
Djéné manampy hoe :
Momar mangataka ny governemanta handray ny andraikiny sy hirotsaka an-tsehatra :
Soratra miverina: Vondrona Afrikana Malemy Ho An’ny Firenena Mikambana 53 · Global Voices teny Malagasy
[…] tamin'ny famahana ny krizin'i Mali ihany koa ny fikambanana. Na dia misy aza ny tatitra mampanahy [mg] avy any amin'ny faritra avaratry ny firenena, izay fehezin'ny vondrona Islamista […]
18 Jolay 2012, 09:12